Ezolonwabo | RayHaber
I-9, apho unyaka omtsha wemfundo uza kuqala e-Istanbul, yathatyathwa ukwenzela ukuthintela iingxaki zendlela ngoMvulo. I-IMM, uKhuseleko kunye ne-Gendarmerie ziya kusebenza kunye ukuqinisekisa ukuhamba kwezithuthi. I-06: 00-14: Ubuninzi phakathi kweeyure ze-00 [More ...]
Umasipala wase-Istanbul Metropolitan, i-Eid al-Adha, i-30 Agasti ka-Agasti uSuku lokunqoba kwaye izikolo ziya kuvulwa ngoMvulo ngo-Septemba ka-9 izithuthi zikawonke wonke e-Istanbul zigqibe kwelokuba zibonelele ngeenkonzo zasimahla. I-Istanbul Metropolitan Assembly Assembly, IMM [More ...]
Xa inkqubo kaloliwe ye-221,7 ikhilomitha ikhwela ukwakhiwa e-Istanbul, ubude benkqubo kaloliwe kwesi sixeko iya kufikelela kwi-233,05 kilomitha nge-454,75 yeekhilomitha ezikhoyo. Ukubaluleka kwenkqubo kaloliwe yokunciphisa uxinano lwezithuthi e-Istanbul [More ...]
Ummiselo omtsha kwiiNkqubo zeSitayile zaseDolophini Uya kunyanzela ooMasipala
Ngelixa iimpazamo zokulahleka kwe-AKP koomasipala abaninzi beedolophu zisaqhubekeka, urhulumente olawulayo wenze amalungiselelo abalulekileyo malunga noomasipala. Ngommiselo omtsha, ngakumbi oomasipala beedolophu abakwazi ukwenza ishishini phantse [More ...]
Inkcazo Ngokukhubazekileyo kunye neKhubazekileyo yeKhadi le-Istanbul
Ngenxa protocol ezisayiniweyo phakathi Ministry of Health kunye noMasipala oMbhaxa Istanbul, "disabled" yaye "Ehamba disabled" ngaphambi istanbulkart inkqubo visa kufuneka babhaliswe kwiSebe lezeMpilo nkqubo. Phakathi koLawulo loMphathiswa wezeMpilo kunye noMasipala waseMetropolitan we-Istanbul [More ...]